ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးအတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲရန် လိုအပ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲမွဲတေ မှုလျှော့ချပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေး အတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း၊ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ အမြောက်အများရှိနေပေမဲ့ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိဘဲဖြစ်နေကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့အခြေစိုက် ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် က ပြောပါတယ်။
မဟာမဲခေါင်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ၆ နိုင်ငံ ဝန်ကြီးများနှင့် ADB အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ အာရှ ပစ္စဖိတ်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မစ္စတာ Stephen Groff တို့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် သတင်းကို ဖော်ပြထားသော ADB ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတစိတ်တပိုင်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ ပဏာမ အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းအရ မြန်မာနိင်ငံမှာ စွမ်းအင် အရင်းမြစ်အမြောက်အများရှိတာမို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး၊ ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ADB အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နည်းလမ်းပေါင်းများစွာအနက် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးတို့ က အဓိကဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြစ်တွေအားလုံးကနေ ရေအားလျှပ်စစ် Megawatt ၁သိန်းကျော်လောက် ထုတ်ယူနိင်မယ်လို့ ADB က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းက သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေကလည်း ၁၂ Trillion ကုဗပေ ထွက်ရှိနိင်ပြီး ထိုင်းနိင်ငံကို ဓါတ်ငေ့ွတွေ ပို့ပေးနေရတယ်လို့ ADB ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေပေါကြွယ်ဝပေမဲ့ မြန်မာနိင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုဟာ အာရှတိုက်မှာ အနည်းဆုံးဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်လို့လည်း ADB က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေပေါများပေမဲ့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ရင်းနှီးငွေကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာ၊ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ပြည့်မီသူ နည်းပါးလွန်းတာ၊ စွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန (၇) ခုကြား ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ADB စွမ်းအင် ညွှန်ကြားရေးမှူး Anthony Jude က ပြောပါတယ်။
စွမ်းအင်ထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စ၊ နယ်မြေခံလူထု အခြေအနေတွေကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
ADB remarks are exactly true. We need well educated, knowledgeable, capable, talented and competent Persons at the critical positions like Electrical Power Ministry, Water Resources Ministry, Telecommunication Ministry and Energy Ministry. If our Leader thinks he can carry on with these incompetent Persons, our country will continue to suffer.